किन भावुक भइन् जाहन्वी ? – Rajdhani Daily
किन भावुक भइन् जाहन्वी ?
मुम्बई / एजेन्सी– जाहन्वी कपुर अभिनित चलचित्र ‘धडक’को ट्रेलर रिलिज भएलगत्तै इन्टरनेटमा चर्चामा विषय बनेको छ । ट्रेलर दर्शकले निकै मन पराएका छन् भने ट्रेलर हेर्नेहरूले जाहन्वीको लुक्समा श्रीदेवीको अनुहार देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
धडकमा आफ्नो चरित्रबारे जानकारी दिँदै जाहन्वीले सैराटकी आर्चीभन्दा निकै फरक रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । ट्रेलर लञ्चको अवसरमा आमा श्रीदेवीको बारेमा सोधिएको प्रश्नले उनी निकै भावुक भइन् । छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, ‘आमालाई निकै सम्झन्छु ।’
उनले आमा श्रीदेवी अभिनित मराठी फिल्म सैराट हेरेपछि यस्तै किसिमको चरित्र निर्वाह गर्न चाहेको बताएको जानकारी दिइन् ।
उनी भन्छिन्, ‘यसैको रिमेकमा काम गर्न पाएकोमा खुसी छु ।’ आमाले केके टिप्स दिनुभएको थियो भन्ने संवाददाताको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनिन्, ‘मलाई आमाले भन्नुहुन्थ्यो इमोसनलाई फिल गर्नु अनि मेहनती हुनु ।’